नाडी छाम्ने डाक्टरको असारे दौड । – जनस्वास्थ्य खबर
नाडी छाम्ने डाक्टरको असारे दौड ।
डा.शम्भु खनाल, काठमाण्डाै। २०७४ साल असार २२ गत, बिदामा म निस्केर काठमाण्डौ आएको पर्सिको दिन मेरो वीर अस्पतालको प्रबेश परिक्षा । पढाईको दौड बढाउन नसके पनी आफ्नो दौड भने राम्रै भएको थियो । त्यो दौडमा आफ्नो कार्यालयको रुपरेखा परिवर्तन गर्ने उत्कट इच्छा मिसिएको थियो । २०७३ साल माघ महिनामा आफ्नो कार्य स्थल पाइला टेक्दा बातावरण निकै मुग्ध थियो । नयाँ ठाउँ नयाँ परिबेश् । नेपाली भाषाको नयाँ लवज । सोही समयमा मेरो मनमा उब्जिएको बिचार “नाडी छाम्ने डाक्टर ” शिर्षकमा उत्रिएको थियो । ( नाडी छाम्ने डाक्टर ।) सल्यान जिल्लाको थारमारे भन्ने ठाउँ बिकासको गति समात्न खोज्दै गरेको अनुभुती हुन्थ्यो । कसैले मनले गियर थिचिदिए गति रन्किने प्रबल सम्भावना देखिन्थ्यो । अहिले भने गियर थिचिदिने प्रबल नेत्रित्व हुँदा फड्को नै मार्ने आश गर्न सकिन्छ ।
कार्यालयको भवन उभिएको थियो निकै आशाका साथ । कसैले मलाई बेहुली सिङारे जस्तै सिङार्छ कि भन्ने आशामा बसेको जस्तो लाग्थ्यो । आन्तरिक क्षमताले सबै काम नसकिने हुँदा कुनै संस्थाको सहयोग माग्न सकिन्छ कि भन्ने ध्यान भने सधैं हुन्थ्यो मलाई । त्यस्तैमा एउटा गैर सरकारी संस्थाले केही सहयोग गर्ने मनसाय रहेको पत्ता लगाएको थिए । उनिहरु सँग संपर्कमा रहिरहेको थिए र त्यो सहयोग अन्य संस्थामा जानुभन्दा आफ्नैमा ल्याउने दौडमै थिए । सहयोग सानो थियो तर निकै प्रभावकारि गर्न सकिने किसिमको थियो ।
सो संस्थाको सहयोगमा केही आवश्यक सरसामाग्री स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने पक्का गरेर काठमाण्डौ आफ्नो परिक्षा भेटाउन निस्किएको थिए । सबैलाई असार महिनामै चटारो पर्नुको कारण बुझ्न सकेको छैन । सो संस्थाले पनि असारको मध्यमा सहयोग दिने बाचा गर्‍यो । त्यो काममा लागियो भने आफ्नै काम छुट्ने पीर पनि थियो । २५ गतेसम्म कागजात संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयमा पुगि सक्नुपर्ने भन्ने उर्दी थियो। तथापि सानो परिबर्तनको इटा जोड्न पर्‍यो भनेर त्यसको कागजात तयार गरेर पठाएको थिएँ कुरियर मार्फत । अब काम सम्पन्न भयो भनेर आनन्द साथ काठमाण्डौ तिर लागेको थिएँ । २२ गते दिउँसो फोन आयो । “ डाक्साप । कागजात त आएको थियो । आज हेर्दा लेखेको मिलेको रहेनछ । कागजात पठाउनुपर्ला । ५००० माथिको रकममा कोटेसन पनि चाहिन्छ । आदि सरकारी नियमभन्दा फरक नियम त्यही समय सिकियो । मेरो मनमा भने “ वर्ष भरि तात्तिनु छैन । असारमै दौडिन पर्ने कस्तो संस्कार होला । “ भर्सेला परोस् भनेर एक मन त जागेको थियो । त्यहिपनि प्रयास गर्नुपर्‍यो भनेर तुल्सिपुर फोन संपर्क गर्न लागेँ । चिनेजानेको कोही नहुनु र भएको पनिकाठमाण्डौ सोही परिक्षा निम्ती हुँदा त्यो काम फत्ते गर्ने प्रयासमा नेपाल टेलिकमलाई भने राम्रै फाईदा भएको थियो त्यो दिन ।
तुल्सिपुर बाट नेपालगन्ज कुरियर गरिएको कागजपत्र काठमाण्डाै सम्म चक्कर खाएर बल्ल नेपालगन्ज पुग्ने रहेछ । त्यस माथि मुग्लिङ सडक निर्माण कार्यको कृपा थियो त्यसबेला । अलि बढिसमय नै बाटोमा चक्कर खाने निस्चित थियो। कुनै पनि हालतमा त्यो २५ गते बिहान १२ बजेभित्र नेपालगन्ज अफिसमा पुग्ने सम्भावना थिएन । केही उपाय लगाउनैपर्ने हुँदा सो कागजात पून : नेपालगन्जबाट काठमाण्डौ अफिसमा पठाइने हुँदा काठमाण्डौ बाट नै मैले त्यो निकालेर अफिसमा पुर्याइदिने कुरा भयो । यस्तैमा त्यो दिन सकियो । अर्को दिन दिउसो परिक्षा दिएर तुरन्तै कुरियर बोकेको गाडी फेला पार्ने क्रममा बल्लतल्ल अनामनगर पुगे । शनिबारको दिन भएकोले कुरियर अफिस नखुल्ने हुँदा गाडी र गाडी चालक नभेटी नहुने थियो । बाटोमा गाडी कुरेर हरेकको नम्बर प्लेट हेर्दै बस्नुपर्‍यो । फेला पनि पर्‍यो । गाडीबाट कागजपत्र बुझेर लाजिम्पाट दौडिएँ र त्यहाँ अफिसमा पुर्याइ म फर्किएँ ।
अर्को दिन स्वास्थ्य सेवा बिभाग गएर सरसामाग्रीको जानकारी लिएर भैरहवा फर्किएँ । परिक्षाको रिजल्ट पनि आएछ । आजसम्ममा असफल भएको मेरो पहिलो परिक्षा । नरमाइलो लागेको थियो । कार्यालयको दौड र किताबको दौड सँगै लैजानुपर्ने देखियो । कार्यालयको चक्करले मलाई पनि चक्कर लाग्यो । असार महिना पुरै ब्यस्त महिना । ट्रैनिन्ङ, मिटिङ आदि सबै कार्य असार महिनाको बिशेषता रहेछ । यो त सानो एउटा कार्यालयको अनुभव मात्रै हो। मलाई अलि याद रहेको घटना । कती कार्य पूरा नहुने होलान् भने कति त कागजमै सिमित हुँदा हुन् ।
घटना सानो भएतापनि असारे दौडले केही कुरा सिकायो । केही कुरा बुझ्न पनि पाइयो । यो त एउटा सानो प्रातिबिम्ब घटना मात्रै हो। तर यस्ता असारे दौडले कार्यसम्पादन कतिसम्म प्रभाबकारी होला भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको थियो । चाहेको खन्डमा धेरै कुरामा परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ । कसैले भरोसा तथा आड दिएमा र गर्ने इच्छा भएमा परिवर्तनले गति अवस्य लिन्छ । नाडी छाम्ने डाक्टरको
स्वरुप केही मात्रामा भएपनी परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि आड दिने स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । र त्यो भूमिका सल्यान थारमारेमा राम्रो रहेको देखिन्छ । सबैको जय होस् ।
साभार : डा.शम्भु खनालको ब्लग बाट
प्रकाशित मिति:- २०७४।१२।२२
Related Topics:dr shambhu khanal janaswasthyakhabar swasthyakhabar
त्यो तीन पानिको महिमा
दशैँमा सेतो कोटको व्यथा
टिचिङ्ग लाइब्ररीमा प्रिय साथी र म
एक एन्टिबायटिकको आत्मकथा
डाक्टर पलायनवादको चुरो
डाक्टर पढ्न धेरै विद्यार्थी मरिहत्ते गर्दछन्? के नेपालमा साच्चिकै भविष्य राम्रो छ त?
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा खटिनि योद्दाहरुलाई जोखिम भत्ता दिनु उचित कि अन्य सुविधा
हेटनारायण रम्तेल, जेठ ५ काठमाडौं । विश्व कोभिड–१९ को महामारी विरुद्ध जुधिरहेको छ । यो मानव जातिको अस्थित्वको लडाई हो । नेपाल पनि यस महामारीको उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यस लडाईमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका मात्र करीव ९० हजार बढी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी क्रियाशिल रहेको अनुमान छ । यस अभियानमा जुध्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक अतिरिक्त सुविधा अनिवार्य छ ।
व्यवसायिक धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र केही निजामती यो लडाइको अग्रमोर्चामा रहेका छन् । उनीहरुलाई यो महाविपत्ति रोक्न सबैले साथ र सहयोग दिएका छन् । यसै वीच कोभिड विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्साहित गर्नका लागि “कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७” आएको छ । यसले काममा थप क्रियाशिल हुन उत्प्रेरित गरेको छ ।
आदेशका बारेमा सामाजिक संजालमा आएका अभिव्यक्ति, अनलाइन समाचार तथा वहसले स्वास्थ्यकर्मीलाई एकहदसम्म विभाजन र निरासा सृजना गरेको छ । राज्य एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रेको छ भने महाविपत्तिमा खटेका कर्मचारीलाई उत्साहित गर्ने दायित्वबाट टाढा रहन पनि सक्दैन । यो वेला भत्ताको समेत व्यवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न थप कार्यविधी वा व्याख्या हुने कुरा स्यंम आदेशमा नै उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुका सबै ट्रेड युनियन, हित समुह तथा निजामती ट्रेड युनियनले समेत चासोपुर्ण रुपमा थप वहसमा ल्याएकाले समाधानको वाटो छिटो र सहज हुने देखिन्छ । यसमा देखिएका राम्रा पक्ष र सुधार गर्नपर्ने पक्षका वारेमा छलफल गरी राम्रालाई स्वीकार गर्दै कमीकमजोरीलाई निरन्तर सुधार गर्नु संलग्न तथा सरोकारवालाको दायित्व हो ।
आदेशलको दफा २ (घ) मा कोभिड–१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई प्रदान गर्ने भत्ता निएकाले यो अभियानमा संलग्न सबै कर्मचारीले कोभिड–१९ जोखिम भत्ता पाउने कुरा पुष्टि गर्दछ । दफा २(छ)११ सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा संलग्न रहेको भनी प्रमाणित गरेको कर्मचारी भनिएकाले स्वास्थ्यको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतका सवै विभागहरु, केन्द्रहरु, अस्पतालहरु अन्य स्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी तथा पालिका तहका अस्पतालहरुमा सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । जोखिम भत्ता कसले पाउने भन्ने विषय दफा ३ कर्मचारीको कार्यस्थल तोकिएको छ । यसले जोखिमका सबै क्षेत्रका कर्मचारी समेट्ने प्रयास भएको छ ।
आदेशको दफा ५ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको पहिचान रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता बापतको रकम मन्त्रालय वा विभागले उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । दफा ६ मा स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका बारेमा उल्लेख छ । दफा ७ मा सतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत र पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता र यो भत्ता पाउने आधार तोकिएका छन् ।
निजी क्षेत्रको सामाजिक जिम्मेवारी यो वेलामा पुष्टि हुनुपर्छ । सरकारी निकाय आफै आर्थिक रुपमा कमजोर भएको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को जोखिमभत्ता सरकारसंग भर परेर हुँदैन । स्रोत साधनले भ्याएसम्म आफ्नो स्रोतको परिचालन गर्नु वुद्धिमानी र सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ ।
भत्ता सम्वन्धमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रमा प्रष्टसंग नसमेटेको र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको गुनासो छ । समान काममा समान भत्ता नभएको र तजविजी अधिकारले सवैलाई न्याय गर्न सक्ने÷नसक्ने सुचिश्चित नभएको अस्पष्ट छ । भत्ता दोहोरो नपर्ने गरी भनी उल्लेख हुँदा दुर्गम भत्ता वा अन्य प्रकृतिका भत्तामा दोरोहो भनेको या कोभिड – १९ को सन्दर्भमा दोहोरा भएिको स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
एकातिर राज्य आर्थिक रुपमा निरन्तर खस्कने अवस्था छ भने अर्कातिर महामारीको संकटको वेला खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पनि छ । राज्यको स्रोत साधनका आधारमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उत्प्रेरणका स्रोत अपनाउन उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तह अन्तरगत रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई देखिने गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ मा जोखिमको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जोखिम भत्ता अपुग गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले माग गरेमा वजेट उपलव्ध गराउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । सुविधा दिँदा समान कार्यस्थलका लागि समान सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोहोरा भत्ता भन्नाले कोभिडको सम्दर्भमा हो या अन्य समेत आकर्षित हुने प्रष्ट खुल्नुपर्छ ।
कोभिड १९ विरुद्धको अभियानमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाका कर्मचारीका परिवारलाई एकैपटक स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । भावी दिनमा सरकारले लगानी गर्ने जलविद्युत आयोगजना तथा विभिन्न सरकारको लगानी रहेका कम्पनिमा कोरोना विरुद्धको अभियानमा संलग्न कर्मचारीलाई शेयर दिने सुनिश्चिता गरेमा उत्साहित हुन सक्छन् । योग्यता वृद्धि गर्न चाहनेका लागि छात्रवृतिको अवसर दिने वा विगतमा दिएको प्राविधक ग्रेड झै जोखिम ग्रेड दिने जस्ता स्किम हुन सक्छन् ।महामारीको वेलामा सार्वजनिक विदाका दिन समेत काममा खटिएकाले सोको अभिलेख राखी पछि विदा दिने वा अतिरिक्त भत्ता वा सट्टा विदाको व्यवस्था हुन सक्छन् । महामारीमा खटिएका कर्मचारीले संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएका भए केही महिनाको व्याज मिनाहा गर्ने स्किम हुन सक्छन् ।
अन्त्यमा, कोभिड–१९ ले मानव सभ्यता चुनौति दिएको छ । सवैको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । राज्य आर्थिक रुपमा ओरालो गतिमा रहेकाले कर्मचारीलाई मौद्रिक स्रोतले मात्र उत्साहित गर्न कठिन होला यसका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोग हुन आवश्यक छ ।
१९ मङ्सिर,निरज के.सि।
स्वतन्त्रको यात्रा हो यो जीवन
बगैँचाको फुलबारी हो यो जीवन
मन र शरीर थकाउने तनाबलाई
मष्तिस्क जलाउने ईर्ष्य लाई
जीवनको रंग हराउने रिसलाई
जति सकिन्छ बेस्सरी हासौँ।
जति सकिन्छ बेस्सरी नाचौँ।
प्रकृतिको कानुनमा चलेको छ जीवन यहाँ
कर्मको गोरेटोमा हिँडेको छ जीवन यहाँ
व्याकुल बनाईरहने धनलाई
जति सकिन्छ मनको कुरा बेस्सरी बाडौँ।
जति सकिन्छ मस्तिष्कको चिन्तन बेस्सरी खोलौँ।
आफ्नै प्रशासनमा चलेको छ जीवन यहाँ
आफ्नै सेवामा बाँचेको छ जीवन यहाँ
पाचन यात्रा विगार्ने खानपिनलाई
मस्तिष्क थिच्ने नकारात्मक सोचलाई
आयु छोटयाउने रोगलाई
अंग अंग पोल्ने ब्लड प्रेसरलाई
जति सकिन्छ व्यायम बेस्सरी गरौँ।
जति सकिन्छ सकारात्मक बेस्सरी सोचौँ।
(के.सि जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् )